नेपाल प्रहरीका ८४ डीएसपीको सरुवा, ६० को पदस्थापन : को-कहाँ ? - नेपालबहस
गृहपृष्ठ सुरक्षा/अपराध नेपाल प्रहरी नेपाल प्रहरीका ८४ डीएसपीको सरुवा, ६० को पदस्थापन : को-कहाँ ?
१५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्यामा प्रहरी नायब उपरीक्षक ‘डीएसपी’हरुको सरुवा र पदस्थापन गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यलयले प्रहरी निरीक्षक ‘इन्स्पेक्टर’बाट बढुवा भएका ६० जना डीएसपीको पदस्थापन गरेको छ । त्यस्तै ८४ डीएसपीको सरुवा गरेको छ ।
जसअनुसार महाराजगञ्ज बृत्तमा रोशन खड्का, बानेश्वरमा दिक्षा बस्नेत, बैतडीमा नारायण अधिकारी र भोजपुरमा कृष्ण चन्द, स्वयम्भुमा नारायण भट्ट र गौशाला बृत्तमा जितेन्द्र बस्नेतको सरुवा भएको छ । त्यसैगरी सुर्यप्रकाश सुवेदी हुम्ला र गोविन्द पुरीको उदयपुर सरुवा भएको छ ।
अघिल्लो लेखलोक कल्याणकारी विज्ञापन अब अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रसारण हुने
अर्को लेखदलित अगुवाहरुद्वारा रुकुम र रुपेन्देही घटनाका दोषीलाई कार्यवाहीको माग